News - Ihe anyị mere na 2020
Iche “mbido siri ike” nke ntiwapụ nke ọrịa 2020 kpatara, ụlọ ọrụ na-arụpụta ụlọ na China atawo ahụhụ na-eso ya, na nsogbu nke ịmaliteghachi ọrụ na mmepụta apụtawo nke ọma.
Mgbe ọrịa a mechara, ụlọ ọrụ na-emepụta ngwa ọrụ eletriki ga-eche echiche nke ọma ma payaa ntị na ụlọ ọrụ nwere ọgụgụ isi, ma kwalite ntinye nke usoro mmepụta akpaaka.
Isi mmalite nke ngosi nke XJCSENSOR keere na:
Emebere nke anọ China Electronics Manufacturing Automation & Resources Exhibition (CMM) na July 9-11 na Dongguan · Guangdong Modern International Exhibition Center.
Na 2019 ~ 2020, XJCSENSOR nyere ego $ 15,385 ma nyere Taitung Village aka, Chengdong Town, Haifeng County iji tufuo ịda ogbenye, Kwụsị ịda ogbenye ma gbasaa ịhụnanya!
Aghọtara na n'ime afọ atọ gara aga, Henggang Sub-district (mpaghara) ebe XJCSENSOR nọ na-ebuli ihe karịrị 9 nde yuan maka owuwu nke ọrụ obibi 14 na obodo Taitung, gụnyere mmiri mgbata, ọkụ n'okporo ámá na okporo ụzọ obodo, gaa meziwanye ebe obibi obibi nke Obodo Taitung.
Obodo ochie nke Taitung nwere ugbu a ọhụụ, ugwu na osimiri mara mma, enweghịkwa ụzọ dị iche iche.
N'otu oge ahụ, n'ime afọ atọ gara aga, Henggang Sub-district na-eduzi ọrụ mwepụ ịda ogbenye na ụlọ ụlọ, na-elekwasị anya na imeziwanye ime obodo, ịhụ na ewuru nke ime obodo ọhụrụ, na ike mkpokọta aku na uba nke obodo.
XJCSENSOR dị njikere inye obere onyinye na mbenata ịda ogbenye ụwa, ọ ga-a paya ntị na nkwado mgbe niile.
Na 22nd, Julaị. XJCSENSOR sonyere na "DIC EXPO 2020", "DIC EXPO International Display Technology and Application Innovation Exhibition (" DIC EXPO 2020 ") nke LCD Branch nke China Optics na Optoelectronics Industry Association kwadoro. Nkwado siri ike site n'aka ọtụtụ ndị ngosi a maara nke ọma.
Site na 15 ruo 19, Septemba. XJCSENSOR keere na 22nd China International Industry Fair ("CIIF") nke a ga-enwe na National Convention and Exhibition Center (Shanghai), nke a bụ nke mbụ mba ulo oru ngosi ẹkenịmde offline mba na 2020. Na nke a ngosi, XJCSENSOR wepụtara ngwaahịa ọhụrụ , esemokwu esemokwu na ihe mmetụta multi-axis.
Site na 12 ruo 15, Ọktọba 2020. XJCSENSOR na-eweta azịza ọhụụ ọhụụ ya, gosipụta ihe ngwọta ngwaahịa ọhụrụ yana patenti rụpụtara na South China International Industry Fair (SCIIF) nke mere na Baoan New Hall of Shenzhen International Convention and Exhibition Center, Okwesiri ikwuputa na na oge a nke ulo oru 4.0, igwe n’ile anya enweela ihe di nkpa n’onu ahia. Ọtụtụ ụlọ ọrụ nyocha ọhụụ na-apụta n'oge akụkọ ihe mere eme. XJCSENSOR na-adabere na ịrụsi ọrụ ike ya na ike ya iji merie ihe ịma aka na ohere ọ bụla na asọmpi nke otu ụlọ ọrụ ahụ. N'otu oge ahụ, ọ na-atụ anya iji ikpo okwu nke South China Industry Fair ka ọtụtụ ndị mmadụ gbaa akaebe ya n'ọhịa nke nyocha ọhụụ igwe Na-eto eto.
2nd ~ 4th, Nov., XJCSENSOR buru ụzọ banye na Ihe ngosi Egwuregwu Batrị nke IBTE 2020 Shenzhen, ihe ngosi a na-eme ka ndị ngosipụta nke batrị ike, batrị nchekwa nchekwa, batrị 3C na ihe mgbago na ala na ihe eji emepụta ngwa ngwa iji kwalite mmepe nke China'slọ ọrụ batrị lithium China.
Site na 28th ruo 30th, Disemba, 30th "Shenzhen International Medical Instruments and Equipment Exhibition" na 2020 ga-enwe na Shenzhen International Convention na Ngosi Ihe Ngosi.
Site na "2020 Shenzhen International Medical Instruments and Equipment Exhibition", XJCSENSOR zutere na ndị na-azụ ahịa dị elu na ọnụ ahịa dị ala ma bụrụ onye na-azụ ahịa nke ọtụtụ ndị na-azụ ahịa mba ofesi; ọ nwere ike ikwurịta okwu ihu na ihu na ndị na-azụ ahịa ma ghọta mkpa na mkpa ndị na-azụ ahịa. Atụmatụ na ịzụta ọnọdụ; ọ bụ ọnụ ahịa ahịa dị ọnụ ala iji nyefee ozi kọntaktị gị na ọdịbendị ụlọ ọrụ ndị na-azụ ahịa na-ekere òkè na ogbako ahụ
XJCSENSOR itinye ego na mgbasa ozi na 2020 fọrọ nke nta ka ọ bụrụ $ 123000. N'okpuru oria a, ntụgharị anyị eruola ọdịnihu dị mma, nke gbagoro okpukpu abụọ ma e jiri ya tụnyere 2019.
Nkwado anyị na FOXCONN, ABB, EPSON, TTI, Huawei, ATL, Philips, Hyundai, Canon Tokki, Ọbịbịa na ndị ahịa ndị ọzọ, yana Harbin Institute of Technology, Beijing Institute of Technology, Zhejiang Institute of Technology, Wuhan University na mahadum ndị ọzọ na-arịwanye elu n'ụzọ na-aga n'ihu.